Madaxa Golaha Sare ee Dowladda Liibiya oo ugu baaqay dhinacyada hubeysan inay qaadacaan doorashada | Dayniile.com
Home Warkii Madaxa Golaha Sare ee Dowladda Liibiya oo ugu baaqay dhinacyada hubeysan inay...
Madaxa Golaha Sare ee Dowladda Liibiya oo ugu baaqay dhinacyada hubeysan inay qaadacaan doorashada
Madaxa Golaha Sare ee Dawladda Liibiya, Khaled Al-Mashri, ayaa la kulmay hoggaamiyeyaasha kooxaha hubaysan si uu ugu boorriyo inay diidaan doorashooyinka, sida uu maanta qoray wargeyska Al-Marsad ee ka soo baxa Libya.
Wargeyska oo soo xiganaya ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in madaxda ciidamada ay soo saari doonaan bayaan la xiriira mowqifkooda ku aadan doorashada la qorsheeyay in Liibiya ay ka dhacdo 24-ka bishan December ee soo socoto.
Sidokale waxa jira Warmurtiyeedka ay soo saareen golaha shacabka Liibiya, kadib markii sida la sheegay ay u arkeen doorashada la qorsheynaayo mid ka hor imaaneyso dastuurka iyo heshiiskii siyaasadeed ee horay loo gaaray.
22 ka mid ah hogaamiyayaasha kooxaha hubeeysan ayaa si wadajir ah u soo saaray bayaan ay ku diiddan yihiin sharciyada doorashada ee ay soo saareen Guddiga doorashada, sida uu baahiyay TV-ga Al-Axraar ee laga leeyahay Liibiya.
Kooxaha hubeeysan ee Liibiya ayaa dalbaday in dib u eegis lagu sameeyo sharuudaha doorashooyinka, taas oo sida ay sheegeen ay ku adkeeynayaan in doorashada wakhtigeeda lagu qabto.
Bayaanka ayaa lagu eedeeyay Guddoomiyaha guddiga doorashada Liibiya, Cimaad Al-Saa’ix , iyo xubnahii Baarlamaanka ee ansixiyay sharciyada Doorashooyinka, taa oo wiiqeysa xasilloonida dalka.
War saxaafadeedka ayaa sidoo kale loogu baaqay Guddiga doorashada in ay u hoggaansamaan sharciga dalka, sidokalana Siyaasadda ay dhexdhexaad ka noqdaan, si waafaqsan dastuurka iyo heshiiska siyaasadeed ee horay loo gaaray.
Previous articleDarawalo tiro badan oo u shaqeeya Qaramada Midoobay oo lagu xirey Itoobiya
Next articleWaaxda caafimaadka UK ee NHS oo amar ku bixisay in shaqaalaha caafimaadka ay qaataan talaalka COVID-19
Odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye oo maalmihii dambe shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa maanta war-murtiyeed kasoo saaray khilaafka ka dhex aloosan Wasiirka Waxbarashada DF...